Faktioran’ny Jirama Misy fomba fikajiana vaovao
Kamio miisa 25 no naparitaka amin’ny Fitantanana Iraisam-paritry ny JIRAMA hahafahana manafaingana ny fidirana an-tsehatry ny teknisiana raha misy tranga na fitarainan’ny mpanjifa ilàna izany.
Ankoatra izay, dia misy ny fanamaivanana ny masoivoho, amin’ny alalan’ny fomba fikajiana vaovao « facturation par lot » manerana an’i Madagasikara, isan’ny fanavaozana entin’ny JIRAMA. Tanjona ny hialàna amin’ny filaharam-be isaky ny fotoana fanefana faktiora ary ny hizarana ny faktiora mandritra ny volana itsahana. Amin’ny « facturation par lot » dia ny fandaniana latsaky ny 30 andro no hefaina ao anaty faktiora, mandalo in-droa any an-tokantrano ny « Releveurs » maka ny mariky ny fandaniana ary manatitra ny faktiora afaka telo andro. Tsy misy fiovana fa ao anatin’ny folo andro ihany no hanefana ny faktiora. Ho an’ny faritra Analamanga, dia handalo in-droa ny « Releveur » amin’ity volana mey ity ka ny voalohany dia hanatitra ny faktiora volana aprily sady haka ny mariky ny fandaniana ary ny faharoa kosa hanatitra ny faktiora volana mey.